Ogaden News Agency (ONA) – Bashiir Axmad Makhtal & Shirkii Jaraa’id ee uu Qabtay.
Bashiir Axmad Makhtal & Shirkii Jaraa’id ee uu Qabtay.
Waxaa shir jaraa’id ku qabtay magaalada Ottowa ee dalka Canada Mudane Bashiir Axmad Makhtar oo mudo 11 sano ah u xidhnaa Gumaysiga Itoobiya.
Mudane Bashiir wuxuu shirkan jaraa’id kusoo bandhigay macluumaad aad u murugo badan oo uu kaga waramay dhibaatadii uu kala kulmay jeelkii mudadii uu kujiray iyo waliba taariikh nololeedkiisii khaaska ahaa.
Warbixinta Mudane Bashiir ayaa guud ahaan saxaafada gilgishay gaar ahaan warbaahinta dalka Canada oo si heersare ah uga soo qaybgashay shirkan jaraa’id ee uu qabtay Mudanuhu. Bayaankii uu Mudane Bashiir ka jeediyay magaalada Ottowa ayaa ka koobnaa arimo aad u xanuun badan oo ku saabsan sidii loo qabtay kadibna loogu wareejiyay Gumaysiga Itoobiya iyo qaab ciqaabeedkii uu kala kulmay taliska Woyaanaha intii uu kujiray xabsiga.
Wuxuu si faah faahsan usoo bandhigay taxanaha taariikh nololeedkiisii gaarka ahaa iyo waliba qoyska uu ka dhashay ilaa taariikhda dalka Ogadenya. Wuxuu cadeeyay in sababta 11 sano jeelka ciqaabta loogu hayay ay ahayd in uu Gumaysiga jaajuus u noqdo si loogu adeegsado shacabka Soomaalida Ogadenya.
Isagoo arintaas ka hadlayana wuxuu yidhi Mudane Bashiir ‘’ waxaa la isku dayay in la igu khasbo in aan dadkayga Soomalida Ogaadeen jaajuuso, taasina waan diiday. Waxaa la igu qasbay inaan la shaqeeyo Gumaysiga Itoobiya waan diiday. Diidmadaas awgeed ayaan ku mutaystay muddo sanad ah in la igu xidho god aad u yar oo hadana qoyan oo dhulka hoostiisa ah’’ ayuu yidhi Mudane Bashiir Axmad Makhtal.
Mudane Bashiir wuxuu diiday oo ka dhiidhiyay in uu xorriyadiisa iyo madax-banaanidiisa ku badasho jaajuusnimo iyo inuu shacabkiisa halganka ugu jira sidii ay xorriyad iyo aayo katashi ku heli lahaayeen uu kasoo horjeedsado isagana loo adeegsado taasoo uu diiday.
Sidoo kale Mudane Bashiir ayaa aad ugu dheeraaday qaabkii loo ciqaabi jiray intii uu jeelka kujiray iyo waliba sidii garsoorka taliska Gumaysigu uusan u xeerinin xuquuqda uu leeyahay muwaadin aan wax cadayn ah lagu haynin in jeelka lagu hayo oo waliba lagu xukumo cimrigaa haku furto.
Mudane Bashiir ayaa codsaday in la sii daayo wiil walaalkii uu dhalay oo oo lagu magacaabo Maxamad Xasan Axmad Makhtal oo isaga oo 16 Jir ah jeelka la dhigay maantana ku jira 11 sano xabsi. Waxa uu ka codsaday dowlada Canada inay Gumaysiga Itoobiya cadaadis ku saarto sidii loo illaalin lahaa xuquuqda shacabka Soomaalida Ogadenya ee kuhoos dulman Itoobiya.
Wuxuu kaloo uu ka hadlay Mudane Bashiir in Awoowgii Makhtal Daahir uu ahaa halgamaa dadkaas iyo dalkiisa u halgamay kaasoo magac iyo maamuus ku leh shacabka Soomaalida Ogadenya. Mudane Bashiir waxa uu wali la qaybsanayaa xanuunka iyo dhibaatada haysata shacabka Soomaalida Ogaadeeniya.
Dhanka kale Mudane Bashiir ayaa si adag uga hadlay kaalintii ay ku lahayd dawlada Kenya in loo gacan galiyo Gumaysiga Iyoobiya. Wuxuu yidhi isaga oo arintaas ka hadlaya ‘Waxaan dacwad ku qaadi doonaa Gumaysiga Itoobiya iyo Kenya oo iska kaashaday in 11 sano aan jeel kujiro’’.
Sidoo kale wuxuu dawlada Canada ka codsaday inay baadhitaan ku samayso wixii khaldamay ee loogu gurman waayay muwaadin Canadian ah oo u qaylo dhaansaday safaaradii Cadana ee Nairobi ku taalay laga soo bilaabi wakhtigii laqabtay taasoo hadii wax laga qaban lahaa uusan ciqaabtan iyo dhibaatadan muteen.
Waxaa kale oo uu ugu baaqay beesha caalamka iyo hay’adaha xuquuqul insaanka in cadaadis lagu saaro Gumaysiga Itoobiya sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda shacabka ku hoos dulman isla markaana jeelasha looga siidayn lahaa maxaabiista tirade badan ee jeelasha lagu ciqaabo.